Akụkọ - Ọdịiche dị n’etiti igwe eletriki na kpo oku mmanụ ọkụ
Ihe dị iche n’etiti igwe ọkụ na kpo oku mmanụ ọkụ
Nyocha nke isi nsogbu na ngwọta nke efere ọkụ eletrik:
1. Igwe okpomọkụ nke ọkụ ọkụ eletrik enweghị ike izute ihe ndị a chọrọ
a. Na-aga n'ihu mma nke ugbu a usoro, na ngwá ike izute ngwaahịa ịkpụzi chọrọ;
b. Otu kpo oku nke efere ọkụ eletrik ezughi oke, na kpo oku agaghị enwe ike zọnye ya nke ọma, na-ebute mkpụrụ ngwaahịa dị ala;
c. ihe Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ na nnukwu ihe ọkụ ọkụ na-ejighị n'aka na ọnụego kpo oku.
2. Ọdịda dị elu nke ọkụ ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ ọkụ
a. Imirikiti efere ọkụ eletrik na-achịkwa ọtụtụ steeti siri ike siri ike, na ọtụtụ tubes na-ekpo ọkụ na-achịkwa kpo oku, nke na-eme ka ihe gbasara nke puru omume;
b. Igwe ọkụ a na-ekpo ọkụ na-adị mfe ikpo ọkụ ma na-ere ọkụ, ụgwọ ọrụ nlekọta dị elu, ma enwere ihe ize ndụ nchekwa;
c. ihe Ebe ọ bụ na a na-etinye ọkpọkọ ọkụ eletrik ozugbo na efere kpo oku, a na-ekpughere ọkpọ ọkụ na ikuku maka ikuku na ikpo ọkụ ogologo oge. Igwe ọkụ eletrik na ọkpọ ọkụ na-ekpo ọkụ dị mfe ịgbanye, nwere ndụ ọrụ dị mkpirikpi, ụgwọ ọrụ mmezi dị elu, ma nwee ihe egwu nchekwa;
3. Kpo oku site na usoro mmezi mmanu mmanu
a. Na nzaghachi nye nsogbu ndị a dị n'elu, Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd. nwere azịza tozuru oke, na-eji mbufe mbufe mmanụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ igwe;
b. Igwe igwe na-akpụzi akpụzi nwere ike ịghọta njikwa njikwa akpaka nke ihe ndị kpụ ọkụ n'ọnụ. Egwuregwu ọkụ eletrik nke akụrụngwa kpo oku, mmanụ na-ebugharị mmanụ dị ka onye na-ebu ọkụ, na-eji mgbapụta dị elu na-ekesa mgbapụta mmanụ iji mee ka mgbasa gbasaa iji nyefee ike ọkụ na mpaghara kpo oku; wee laghachi DC kpo oku akụrụngwa iji nọgide na-ekpo ọkụ ọzọ, na-ekwughachi usoro a iji nweta mmụba na-aga n'ihu na ikpo ọkụ, nke mere na ihe a ga-ewe iwe Ọkụ na-arị elu na usoro nke iru okpomọkụ na-ekpo ọkụ na-achọ ka ojiji nke usoro mgbasa ozi na-apụ apụ. , edo kpo oku, indirect okpomọkụ akara, ngwa ngwa okpomọkụ ịrị elu na-ada, mfe mmezi, na ala thermal inertia;
4. Nchịkwa mpaghara iji melite ịdị n'otu okpomọkụ
a. N'ihe banyere njikwa ọnọdụ dị oke nkenke nke igwe na-akpụzi igwe, n'ihi nsogbu nke ịdị n'otu ala dị ala, Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd. nakweere mpaghara efere na-ekpo ọkụ otu usoro njikwa njikwa; dịka ọmụmaatụ, nha nke efere dị ọkụ bụ 4.5m X 1.6m, Otu efere na-ekpo ọkụ na-ekewa n'ime mpaghara atọ nke 1.5 mita X 1.6 mita maka njikwa okpomọkụ onwe ya na ịkwụ ụgwọ ọkụ. Igwe elu na-ekpo ọkụ dị elu na nke dị ala na-anabata sekit mmanụ 6 na mpaghara 6 maka njikwa ọnọdụ okpomọkụ, na ịdị n'otu ọnọdụ dị iche iche karị;
b. A na-eji igwe eji akpụzi akpụzi njikwa abụọ emechiri emechi, n'etiti nke a na-eji mmanụ mmanụ na sistemụ mmanụ mmanụ eme ihe dị ka njikwa mechiri emechi iji hụ na ọnọdụ mmanụ nwere ike ịdị na mpaghara a na-achịkwa ± 1 ℃; na set okpomọkụ na ebu ma ọ bụ na-ekpo ọkụ efere okpomọkụ na-guzobere ọzọ Emechiri-akaghị akara, ezigbo oge okpomọkụ akara nke ebu, ọzọ ala.
Ihe dị iche n’etiti igwe eletriki na igwe oku mmanụ
1. Uru nke mkpanaka ọkụ eletrik: kpoo ọkụ ọkụ, enweghị ọnwụ dielectric, ọsọ ọkụ ọkụ ngwa ngwa, ọnụ ala dị ọnụ ala, ma dịkwa mfe itinye ozugbo na efere ọkụ;
2. Uzo ojoo ogwe osisi oku eletrik: ulo oku, ugwo ego (choro otutu ndi na-agbanwe oku), nkpochapu mgbagwoju anya, nnukwu ihe na-adighi nma, na nnukwu efere kpo oku oku.
3. Uru nke igwe okpomọkụ igwe: jiri usoro mgbasa ozi na-ekpo ọkụ na-apụ apụ, na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, njikwa ọkụ ọkụ na-apụtaghị aka, ịrị elu ngwa ngwa na ọdịda, mmezi dị mfe, obere nrụrụ ọkụ, njikwa ike, njikwa ọkụ na njikwa nke jụrụ oyi;
4. Uzo ojoo nke igwe okpomoku mmanu: mmezi nke akụrụngwa ga - ebute oke nfu, na ego ntinye ego nke mbu ga - adi elu;
Mmanụ mwụpụ mgbochi mmanụ nke igwe okpomọkụ mmanụ
1. Ngwunye sistemụ na-anabata GB 3087 ọkpọkọ pụrụ iche maka ndị na-agba mmiri na-ajụ ihe na obere nsogbu, na 20 # pipeline na-agbakọta iji mepụta na usoro a tụkwasịrị obi ma ghara ịwụpụ mmanụ;
2. Thegbọ mmanụ ụgbọ ala na-agbaso ngwaọrụ nchọpụta ọkwa mmiri. Ozugbo usoro ahụ na-agbapụta, ọkwa mmiri nke tank mmanụ na-ebelata na akụrụngwa na-akwụsị na mkpu;
3. pipeline nakweere ngwaọrụ nchọpụta nrụgide. Ozugbo usoro ahụ na-agbapụta mmanụ, nrụpụta mgbapụta mgbapụta na-ebelata na nrụgide kpo oku enweghị ike iru, usoro ahụ na-egbochi kpo oku;
4. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ozugbo usoro ahụ nwere mmanụ mmanụ, ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ga-abawanye nke ọma, a machibidoro usoro ahụ ịgba ọsọ.
5. Akụrụngwa akụrụngwa nwere mkpuchi maka nchapu mmanụ, ọdịda, mmebi, wdg. Ozugbo ọdịda dara, usoro ikpe ahụ ga-akwụsị ma ọ bụ kwalite ọrụ ahụ na-akpaghị aka ma gosipụta ọnọdụ njehie.